အသက် ၃၄ နှစ် - လိင်တူချစ်သူ - (ED) ဦး နှောက်ပျောက်ကင်းသွားပြီ။ အပြုံးကြောင့်နှိုးဆွနိုင်
အသက် ၃၄ နှစ် - လိင်တူချစ်သူ - (ED) ဦး နှောက်ပျောက်ကင်းသွားပြီ။ အပြုံးတစ်ခုကြောင့်ငါနိုးလာနိုင်တယ်
ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကဒီစိန်ခေါ်မှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn စွဲလမ်းမှုနဲ့ ED ပြissuesနာတွေပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ်ကတော့ ၂ ပတ်ကြာတယ်၊ နောက် ၆ ရက်အကြာမှာပဲ flatline ကိုရောက်လို့ပဲ။
ငါ့ရဲ့ virility ဟာသေလောက်ပြီလို့တွေးမိပြီးကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတယ်။ မလိုချင်ဘူး၊ ဆန္ဒမရှိဘူး၊ မနက်မှာသစ်သားမရှိသေးဘူး။ သူကအလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ရဘူးလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ (သူကအလုပ်မလုပ်ဘူးလား၊ အလုပ်လုပ်မှာလား၊ အလုပ်လုပ်မှာလား၊ မလိုချင်လား!) ကိုယ့်ဆန္ဒအတွက် fapping မဟုတ်ခဲ့၊ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်ငါအသစ်တစ်ခုကို Streak အတူတူပါပဲစတင်ရန်, Flatline ကိုတိုက်ရိုက်, ငါအကြောင်းကိုအများကြီးဖတ်, ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု, အိပ်မပျော်, အဘယ်သူမျှမတိုက်တွန်းချက်စသည်တို့ကို ... ဒါပေမယ့်အဲဒီအခြိနျငါခိုင်ခံ့ရပ်နေ, ငါ့ flatline နီးပါး4ပတ်ကြာခဲ့သည်။
ငါအချိန်တွေကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှမေ့လျော့ခဲ့သည်, ငါ့ရိုးရှင်းသောစာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ အားကစားရုံသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားခြင်း၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူလှည့်လည်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်းစသည်တို့ကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
တစ်နေ့သို့မဟုတ်တစ်နေ့အတိအကျငါ boner နှင့်အတူနိုး !!!! maaaan, ငါအပြာဆေးပြားများသုံးသော်လည်းတောင်မှရေအောက်တွင်ပင်မတ်တပ်ရပ်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမထိချင်ပါ။ ကစားစရာမကစားမီကစားစရာများကိုကြည့်နေသည့်ကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့၎င်းကိုလေးစားမိသည်။ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအားအင်ပြည့်ဝစေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်
နေ့ခင်းဘက်၌ငါသတိပြုမိသည်မှာလမ်းများရှိကျွန်ုပ် ပို၍ ယုံကြည်မှုလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပူပြင်းသောကောင်လေးတစ်ယောက်သည်ငါ့ကိုငေးကြည့်လျှင်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ (ငါ့ ဦး နှောက်က 'ဘာ့ကြောင့်လဲ? ပြီးတော့သူ့ကိုပျော်မွေ့အောင်တောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ?? ') …ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ငါက' ဟုတ်တယ်၊ ငါလိုချင်သူမည်သူမဆို 'ရနိုင်' တယ်၊ ပြီးတော့ဒါဟာစူပါပါဝါဖြစ်တယ်၊ အဲဒါတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ညစ်ညမ်းသောကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြည့်ရန်၊ ဆွဲဆောင်ရန်၊ လူသစ်များနှင့်စကားပြောဆိုရန်စသည်တို့အားလုံလောက်သောအားရှိပုံရသည်။
ဒီတော့နောက်ထပ် ၂ ပတ်လောက်ငါစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ အိပ်မက်စိုစွတ်လာပြီ၊ တကယ့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊
ဒါကြောင့်ပြီးနောက်တစ်ရက် (ဈ, ဘိုင်ပြတ်စိတ်ဓာတ်နှင့်ဒါပေါ်မှာရှိဖို့အသုံးပြု), ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုငါ့ခွေးနှင့်အတူန်းကျင်ဆွဲထားတစ်ဦးကိုကျပန်းကောင်လေးပဲငါ့ကိုမှာပြုံးပြသောတနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါကငါ့ကိုမဆိုစိုက်ထူပေးခြင်းမခံခဲ့ရ, အပူဆုံးကောင်လေးအများပြည်သူ၌ငါ့ crotch ဖမ်းဆုပ်ခံခဲ့ရရင်တောင်ကိုယ်အစောပိုင်းကအချို့သောသူ၏မျက်စိထဲမှာအလိုဆန္ဒနှင့်3လအတွင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းယခုပြောနိုင်,
ဒါပေမယ့်ထိုနေ့, ကျပန်းကောင်လေး, ထိုအပြုံး, ငါရုတ်တရက်စိုက်ထူခဲ့! ခိုင်မြဲ၊ မယုံနိုင်စရာ၊ ဖုံးကွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအရာ! အပြုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ခွေးအကြောင်းချက်တင်စကားဖြစ်လာသည်။ ငါသူ့ကိုသောက်ဖို့ဖိတ်လိုက်တယ်၊ ငါကြောက်နေတုန်းပဲ၊ (လိင်မှုကိစ္စကိုအဆိုပြုခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်ခြင်း) ... ဒါပေမယ့်ငါတို့က ၄ နာရီလိုပြောခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သူသည်ငါ့အိမ်သို့ရောက်လာသည်။
ပြီးတော့ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ အပြာရောင်ဆေးလုံးတွေမပါ ၀ င်ဘူး၊ ကွန်ဒုံးပြissuesနာလည်းမရှိဘူး၊ ဒါကပြီးပြည့်စုံတယ်။ သူပြောတာပဲ။ ငါနားလည်လိုက်တယ်၊ အဲဒီကနေစပြီးမျက်နှာပြင်ပြားမဟုတ်ဘဲတကယ့်လူတစ်ယောက်ကနှိုးဆွပြီးအပြုံး၊ အရေပြားနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်နှိုးဆွနိုင်သည့်အတွက်ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုမှပျောက်ကင်းသွားသည်ကိုနားလည်ခဲ့တယ်။
နှစ်ပေါင်း ... လွန်ပြီ စိတ်မကောင်းစရာကအထီးကျန်ခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းကငါ့ကိုညစ်ညမ်းစေသောစွဲလမ်းစေခြင်းသို့ပြန်စေခဲ့သည်။ ဤတွင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မည်မျှကြာမည်ကိုမသိပါ။ သို့သော်ယင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဤသို့ပြုခြင်းကဲ့သို့ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါမကြောက်ဘူး၊ ထူးခြားတဲ့ကွာခြားချက်ပဲ။
ယခုတွင်ငါသည် 31-32 ခဲ့ 34
LINK - by nomorefap32